MIUI 11 waxaa horey loogu sii diyaariyay Redmi 5 iyo Xusuusin 5 Shiinaha | Androidsis
MIUI 11 wuu sii fidayaa inta udhaxeysa taleefannada Xiaomi iyo Redmi. Shalay taa waan kuu sheegnay waxay ahayd Redmi 8 iyo 8A kuwa horeyba u helayay nooca cusub ee lakabka calaamadeynta, taas oo shaki la'aan ah talaabo muhiim u ah kiiskan. Hadda waxaa jira laba nooc oo dad badani filayeen in dibedda laga heli doono kuwa cusbooneysiinaya. Waa markabkii Redmi 5 iyo Xusuusin 5.
In badan oo ka mid ah waa wax lala yaabo in Redmi 5 iyo Xusuusin 5 u cusbooneysii MIUI 11. Maaddaama labadan moodel ay horeba qaarkood duug yihiin, laakiin nooca Shiinaha ayaa sida caadiga ah si aad u wanaagsan u sameeya marka la eego cusbooneysiinta lakabka qaabeynta. Marka labadan moodel iyaguna way helayaan.
Labada taleefanba waxay adeegsadaan Android Pie, sidaa darteed noocooda MIUI 11 wuxuu ku saleysan yahay noocaan nidaamka qalliinka. Uma muuqato inay u muuqato inay calaamaduhu bilaabayso Android 10 moodooyinkaas, illaa iyo hadda lama sheegin wax jira. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaa la joogaa xilligii cusboonaysiinta.
Cusboonaysiinta mar hore ayaa lagu sii daayay Shiinaha. Sida caadada u ah shirkada, wax yar ayey qaadan doontaa in la balaariyo adduunka, laakiin waa wax aan filayno inay dhici doonaan maalmaha soo socda. Sidaas darteed haddii aad leedahay mid ka mid ah labadan taleefan, uma baahnid inaad sugto muddo dheer.
In yar ayaan u aragnaa sida MIUI 11 ayaa imanaya moodooyinka badankood ee sumadda Shiinaha. Sidoo kale moodooyinka sida kuwaan oo kale ah 'Redmi 5' iyo 'Note 5' ayaa marin u heli kara, waa wax ay adeegsadayaashu jecel yihiin, maxaa yeelay waxay caddeynaysaa sida ay shirkadda uga go'antahay arrintan. Si ay ugu raaxeysan karaan wararka.
Isticmaalayaasha ka baxsan Shiinaha ee leh Redmi 5 iyo Xusuusin 5 ayaa la filayaa inay marin u helaan cusbooneysiinta waqti dhow. OTA ayaa la bilaabi doonaa halka aad horey ugula jirtay MIUI 11 iyo sidan oo kale si aad ugu raaxeysato dhammaan shaqooyinkan ku jira.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Redmi 5 iyo Xusuusin 5 waxay cusbooneysiinayaan MIUI 11
Nokia waxay si dhakhso leh u daahfureysaa telefishanka Smart TV-ga Hindiya